Isango elingagqibekanga le-IP 192.168.0.1 is esetyenziswa ziirutha kunye neemodem ezinjenge-D-Link umzila njengedilesi emiselweyo ye-IP yokungena kwikhonsoli yomlawuli. Ukucwangcisa useto oluphambili nolusisiseko lwe-192.168.0.1 lunokusetyenziswa.
192.168.0.1 Ulawulo lokungena
Amanyathelo okuNgena kwi-IP 192.168.0.1
Ukuba idilesi ye-IP engagqibekanga yeModem / ye-Intanethi ye-Intanethi ingu-192.168.0.1 kuloo meko, ngokungathandabuzekiyo ungayisebenzisa ukungena kwi-console yoqwalaselo nakwimodem / umzila wakho olawula useto lwe-Intanethi. Ngokulula ukungena kwi-192.168.0.1, landela le miyalelo ingezantsi
Qiniseka ukuba isixhobo siqhotyoshelwe kwinkqubo nokuba ngaphezulu kwe-Ethernet Wire okanye ngaphandle kwentambo.
Ngoku vula isiphequluli sewebhu osisebenzisayo ukufikelela kwi-Intanethi.
Kwibhari yedilesi, chwetheza http://192.168.0.1 or 192.168.0.1.
Iphepha lokungena kwi-router yakho kunye nemodem iya kubonakala kwiscreen.
Ngenisa ii-Ids zokungena ngokungagqibekanga ezinje ngegama lomsebenzisi ukongeza kwigama eligqithisiweyo kwiphepha loqwalaselo lomzila wakho.
Umzuzu ongenise iirekhodi zokungena, uya kungena kwiphepha loqwalaselo lewebhu ukongeza uyayazi indlela yokwenza uguquko olufunwayo.
Ngaba awunakho ukugcina ingxelo kwiinkcukacha zokungena ngaphezulu kwamagama aphambili?
Ukuphonononga incwadana yemiyalelo
Ukuba wosilele ukukhumbula iziqinisekiso zokungena kwi-192.168.0.1 emva koko kuya kufuneka ujonge iNcwadi okanye iBhokisi yomzila. Ukongeza, kuya kufuneka ujonge uluhlu lwe-router engagqibekanga yamagama abasebenzisi kunye nepaskey yee-routers.
Ukuba uhlengahlengise iinkcukacha zokungena kwi-router kwaye ungayikhathalelanga ngelo xesha eyona ndlela iphambili kukuba ubuye kwakhona kukufumana kwakhona ukuseta kwakhona i-router ngocwangciso olungagqibekanga olubuyisela zonke iinguqulelo kwakhona kwiziphene. Ukuseta kwakhona i-router:
Fumana into enqatyisiweyo njenge-toothpick okanye iPin kwaye uzame ukufumana ukutshintsha kwakhona kwii-routers.
Lo mzuzu uqaphela utshintsho oluncinci oluyimfihlo. Cinezela kwaye ubambe iswitshi kangangemizuzwana engama-15 ukuya kwengama-20 ngento ebonisiweyo.
Oku kuyakubuyisela lonke uhlengahlengiso kwakhona ukubuyela kuseto olungagqibekanga kunye namagama abasebenzisi / amagama agqithisiweyo owaguqulileyo. Ke ngoku uya kuba nakho ukungena ngemvume ngokugunyazisa okungagqibekanga kokungena.
I-IPs iyonke ineedilesi ezimalunga ne-17.9 yezigidi, zonke zibekelwe bucala ukuba zisetyenziswe kwinethiwekhi yabucala. Ke ngoko, i-IP yabucala ye-router ayimfuneko ukuba ikhetheke.
Kuzo zonke izixhobo ezikwi-network i-router inika idilesi ye-IP egcinwe kuyo, nokuba yindawo esekwe kwinqanaba leshishini okanye inethiwekhi encinci yekhaya. Zonke izixhobo ezikule nkqubo zinokunxibelelana nenye igajethi kule nkqubo ngale IP yobuqu.
Nangona kunjalo, idilesi ye-IP yabucala ayinakho ukufikelela kumnatha. Iidilesi ze-IP zobuqu kufuneka zidityaniswe noMboneleli weNkonzo ye-Intanethi, umzekelo, iComcast, iSpectrum okanye iAT & T. Ke ngoku, zonke izixhobo ezidityaniswe kwi-intanethi hayi ngokuthe ngqo, ekuqaleni zinxibelelana nenkqubo, eqhotyoshelwe kwi-intanethi, kamva ixhuma kwi-intanethi enkulu.